आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, के मा कति बढ्यो ? – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। भारतबाट केही मूल्य बढेर आएकाले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। जसअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेको छ। हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा विक्री मूल्य हालकै यथावत राखिएको छ।
अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १११ रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो मूल्य समायोजन गरे पश्चात् नेपाल तर्फको विरगञ्ज नाकाको तुलनामा भारतको रक्सौलमा कायम भएको पेट्रोलको खुद्रा विक्री मूल्य १८ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति लिटरले सस्तो र डिजेलको खुद्रा विक्री मूल्य १८ रुपैयाँ २७ पैसा प्रति लिटरले नेपालतर्फ सस्तो हुन गएको निगमले जनाएको छ।
बढेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ। उपरोक्त समायोजन पश्चात् काठमाडौंसहित सुर्खेत र दिपायलमा १११ रुपैयाँ प्रति लिटर पर्नेछ। पोखरा र दाङमा ११० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र अन्य तराई क्षेत्र (चारआली, विराटनगर, धनुषा, विरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढी)मा प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ।
त्यस्तै डिजेल/मट्टितेलको खुद्रा विक्री मूल्य काठमाडौंसहित सुर्खेत र दिपायलमा १०० रुपैयाँप्रति लिटर, पोखरा र दाङमा ९९ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति लिटर र अन्य तराई क्षेत्र (चारआली, विराटनगर, धनुषा, विरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढी)मा ९८ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर कायम भएको छ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा सर्लाहीको हरिवन र बाँकेको न्यूरोमा विस्तार
कास्कीमा कुमारी बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा !
आज फेरी ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य
७ महिनापछि तोलाको ९० हजार रुपैयाँ भन्दा तल सुन
आज फेरी बढ्याे सुनकाे मूल्य
चीनसँग जोडिएका तातोपानी नाका र रसुवास्थित रसुवागढी नाका बन्द